Maitiro ekuitisa akakwana Halloween firimu husiku mu2020
Ita shuwa yekuve nezvinodiwa zvinotyisa zviripo paHalloween mafirimu ehusiku, izere nemaboos uye zvinotarisa Halloween iri Mugovera gore rino, izvo zvinosiya nguva yakawanda yezviitiko zvemweya. Kunyangwe iyo nzira yehunyengeri kana yekurapa inogona kunge yakasiyana uye inogona kutotenderera nekwaunogara, hazvireve kuti unogona ...
Unhu hunodiwa uye hunhu hwepurasitiki dhiramu
Izvo zvigadzirwa zvepurasitiki dhiramu zvinonyanya kugadzirwa ne polyethylene, polyester uye mamwe mapurasitiki, uye anonyanya kushandiswa kubata glacial acetic acid, tert butyl peroxide, petroleum zvinhu zvine ngozi, asidhi uye alkali zvinokanganisa zvinodhaka, nezvimwewo. isina kusimba, isina ngura, ...
Mabasa uye hunhu hwepurasitiki bhaketi
Mapuranga epurasitiki anonyanya kugadzirwa ne polyethylene, polypropylene uye mamwe mapurasitiki (chimiro: resin yekugadzira, plasticizer, stabilizer, pigment) nekuvhuvhuta kuumbwa uye jekiseni kuumbwa. Iyo inoshandiswawo kune yekunze kurongedza kwemvura uye yakasimba zvinyorwa mumaindasitiri akasiyana siyana senge kemikari ...
Chii chatinofanira kuteerera kana tichishandisa epurasitiki jekiseni dhiramu
Kana ikashandiswa, inogona kuzivikanwa neinotevera nzira: moto nzira. Inofananidzwa ne PE epurasitiki dhiramu, kupisa kupisa kwePP mapurasitiki dhiramu kuri nani zvishoma, asi kunyangwe hazvo tembiricha iri pamusoro, pane njodzi yekunyorova uye kunyungudika, saka tembiricha yakakwira inofanira kudzivirirwa se ...